आमाको खुसीको लागि आमालाई नै मुद्दा हाले : हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ - New Sansar
चर्चाको शिखर चुम्न सफल को हुन् फुलन्देकी ‘आमा’ ? जान्नुहोस
२ बर्ष देखि श्रीमानले छाडेर भागेपछि सबिना रुदै मिडियामा !भन्छिन “अब छोरीलाई पनि मार्छु आफु पनि मर्छु
नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानको उद्घाटनमै कुटाकुट
यस्ता व्यक्तिले उखुको जुस पिउन हुदैन जानी राखौ
नेपालकै पहिलो डोजर चालक मुना घिमिरे
विदेशबाट नेपाल फर्कदा टेलिभिजन ल्याउन रोक लगाउन चौधरी समुहको सरकारलाई पत्र !
कुलमान घिसिङ साँच्चिकै यो देशका भगवान बने
मृत्यु जितेर फर्केका खडग बहादुर ६ बर्ष पछि श्रीमतीलाई भेट्दा भावुक बने
एउटी यिनै महान आमा, जसले पात गाँसेर हरिवंशलाई हुर्काइन्
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/आमाको खुसीको लागि आमालाई नै मुद्दा हाले : हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ
आमाको खुसीको लागि आमालाई नै मुद्दा हाले : हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ
आमा भगवानको अर्को रुप हुन् भन्ने लाग्छ मलाई । तर, मैले आमाबाटै आमाको माया अनुभव गर्न पाइनँ । म ६ महिनाको हुँदा मेरी आमा बित्नुभएको हो रे । सम्झनामा सचित्र त आमा हुनुहुन्न तर भावनामा हुनुहुन्छ । उति बेला फोटो त्यति प्रचलनमा आइसकेको थिएन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको जमाना थियो । धेरैपछि हो मैले मेरी आमालाई तस्बिरमा हेरेको । मामाको घरमा जाँदा यी तिम्री आमा भनेर मलाई तस्बिर देखाइएको थियो । ए, यस्ती पो हुनुहुँदो रहेछ मेरी आमा भनेर धेरैबेर तस्बिर हेरेको याद छ ।
मेरी आमा बितेको केही पछि बुवाले अर्को बिहे गर्नुभयो । दोस्रो आमालाई म राम्रैसँग सम्झन्छु । उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको माइती न्युरोडमा हो, मलाई पनि लैजानुहुन्थ्यो । त्यहाँ सबैले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो ।
दोस्री आमा पनि दुईटा बच्चा जन्मेपछि बित्नुभयो । पछि दुइटा बच्चा पनि बिते । त्यसपछि बुवाले तेस्री आमा बिहे गर्नुभयो, लगनटोलबाट । तेस्री आमालाई मैले राम्रैसँग सम्झन्छु । उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । जहाँ जाँदा पनि सँगै लैजानुहुन्थ्यो । तर, तेस्री आमा पनि बित्नुभयो । उहाँले एउटा छोरा जन्माउनुभएको थियो, ऊ पनि खस्यो ।
त्यसपछि बुवाले अहिलेकी आमा ल्याउनुभयो, रामेछाप भंगेरीबाट । जति बेला म आठ वर्षको थिएँ । आमा मभन्दा मात्रै नौ वर्ष जेठी हुनुहुन्छ । अहिले ७४ लाग्नुभयो ।
अहिलेकी आमाले सानोमा मेरो ख्याल गर्नुभयो, माया देखाउनुभयो । म स्पष्ट बुझ्थें– मेरो नजरमा उहाँलाई सानिमा बन्नु थिएन ।
आफ्नी आमा र त्यसपछिका दुइटी आमा गुमाउँदासम्म मलाई मेरा फूपूहरूले हुर्काउनुभएको हो । खासगरी सानो हुँदा नै आमाको माया चाहिन्छ, चाहिने मात्रै होइन पाइन्छ पनि । तर, त्यस्तो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएन । जन्म दिने आमा गुमाएपछिका आमाहरूले पनि मलाई माया नगर्ने त होइन । तर, उहाँहरू पनि लामो समय रहनुभएन ।
सानोमा मनमा लाग्ने र सम्झना हुने गरी फूपहरूबाटै हो मैले माया पाएको । फूपूहरुको मायामा कुनै कमी थिएन । फूपूहरू भगवानजस्तै लाग्छ मलाई । फूपूहरूले खाना खुवाएको, चुठाएको, नुहाइदिएको, लुगा फेरिदिएको सम्झना छ ।
मेरा तीन फूपूमध्ये दुईजना बितिसक्नुभयो । कान्छी फूपू हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले नानीफूपू भन्छु । उहाँलाई सबैले घरमा ‘नानी’ भनेर बोलाउँथे । माइली फूपूलाई हजुरफूपू र ठूलीलाई ठूलीफूपू भन्थें ।
फूपूहरूका छोराछोरीसँग अहिले दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सम्बन्ध छ । नानीफूपू अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ, अमेरिका जाँदा उहाँहरूकैमा बस्छु
पछिल्ली आमा जो अहिले हुनुहुन्छ, उहाँलाई आमा भन्छु । मेरो शब्दकोषमा सानिमा भन्ने शब्द छैन । यतिसम्म कि नाटक, टेलिफिल्म, चलचित्र, प्रहसन, रेडियो कार्यक्रम केहीमा पनि मैले ‘सानीआमा’ उच्चारण गर्नुपर्नेछ भने त्यो मलाई स्वीकार्य हुँदैन । ‘सानीआमा’ उच्चारण गर्नुपर्ने कुनै भूमिका छ भने पनि त्यसमा खेल्दिनँ । किन–किन मलाई आमा नै भन्नुपर्छ ।
म जन्मेर हुर्केको जितुफेदीमा हो । उतिबेला बालाजुबाट एक घन्टा हिँडेर जानुपथ्र्यो । हाम्रो फेदी र काठमाडौंमा जग्गा थियो, छ ।
हाम्रो परिवार काठमाडौं नरदेवीमा भाडामा पनि बस्यो । मेरो बुवा प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । राजनीति होइन, समाजसेवा गर्नुहुन्थ्यो बुवाले । बुवा प्रधानपञ्च भएकाले घरमा थुप्रै मान्छे आउँथे, अनेक काम लिएर । बुवा सधैँ अर्काको काम गरिदिन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । बुवाको कुनै कमाइ थिएन । जग्गा पनि हजुरबाले जोड्नुभएको हो । बुवा ०३२ सालमा बित्नुभयो ।
मेरी अहिलेकी आमातिर दुइटी बहिनी र एक भाइ छ । हाम्रो काठमाडौं सोल्टीमोडमा पुख्र्यौली जग्गा थियो । त्यहाँको जग्गा बेचेर पैसा तीन भाग लगायौं– आमा, भाइ र मलाई । मैले नख्खीपोटमा जग्गा किनेँ । ०३८ सालतिर मैले घर बनाएपछि हाम्रो भान्सा अलग भयो ।
आमा र भाइका लागि नयाँबजार खुसिपुमा घर बनायौँ । घर नबनाउँदासम्म पैसा भाइको नाममा बैंकमा राख्यौँ । तर, चेकबुक मैले राखेको थिएँ, उनीहरूले खर्च गर्लान्, घर नबनाउलान् भनेर । घर बनाउन चाहिने खर्च निकाल्न मात्रै मैले चेकबुक दिन्थेँ ।
हाम्रो सबै जग्गा भाइ, म र आमाको नाममा छ । कित्ताकाट गरेका छौँ, छुट्याएका छैनौं, अझै सगोलमै छ ।
पछि भाइ र आमाले ३६ प्रतिशत ऋण लिएछन्, केही कारोबार गर्न भनेर । तर, घरै खाइदिने स्थिति आएछ । लालपुर्जा पनि ऋण दिनेले लगेछ । जग्गा हामी तीनैजनाको नाममा भएकाले आमाले मलाई भन्नुभयो, ‘बाबु, मेराविरुद्ध मुद्दा हाल । आमा र भाइले मलाई नसोधी घर बेचे भनेर हकदाबी गर, घर त जोगाउनुपर्यो ।’
आमाविरुद्ध के मुद्दा हाल्ने भनेर वास्तै नगरी फर्कें । अब ऋण लिएकै हो, तिर्नैपर्छ । भाइ र आमालाई एउटा घर कतै खोजौँला, बनाउँला भन्ने सोचेको थिएँ । भोलिपल्ट त आमालाई हर्टअट्याक भयो । आमाको अप्रेसन भयो, आइसियुमा राखिएको थियो । एक दिन हस्पिटलमा गएर भनेँ, ‘आमा, मैले हजुरको विरुद्धमा मुद्दा हालेँ ।’ आमा पनि खुसी हुनुभयो ।
मुद्दा मैले जितेँ । घर त गइहाल्यो, तर मेरो भागको पैसा आयो । त्यसैले आमा र भाइका लागि एउटा राम्रै घर किन्यौँ । अझैसम्म हाम्रो सम्बन्ध यस्तै सौहार्द छ ।
[रातोपाटीबाट लिएको सम्पादित अंश]
बरिस्ट हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जन्मदिन, कति बर्ष लागे उनी ?
म पारिश्रमिकको डिमान्ड गर्दिनँँ
डेढ महिनाअघि विहे गरेर भित्र्याएकी श्रीमती उनका लागि काल बनिन्।। छोराको काल बनेर बुहारी भित्रिएकी रहिछिन्’
प्रहरीलाई खुसिको खबर : तलब भत्ता बड्यो जबानको 30 हजार अरुको कति
६१ वर्षको उमेरमा भोज भतेर सहित धूमधाम विवाह । नातिनातिना जन्ती
आमा-बुवा दुवैले छाडेर गएपछि क्यान्सर पीडित भाईलाई बचाईदिन दिदिको अनुरोध